sal-dhigida Company - Ningbo Focusway Makiinado Co., Ltd
Ningbo Focusway Makiinado Co., Ltd waa dhiman aluminium qaybo shubay iyo adeega alaab-xirfadeed. Waxay bixisaa adeeg OEM one-stop, ka tooling, dhiman ridaya, machining, daaweyn dusha, kaydinta iyo shixnad. Waxa kale oo ay bixisaa alaabta kale ee la xidhiidha adeegga iyo sida ay shuruudaha macaamiisha.
Focusway caasimadii at Beilun Ningbo, taas oo ah mid ka mid ah salka warshadaha dekedda iyo shubay ugu muhiimsan ee Shiinaha. Shirkadda waxaa la aasaasay sannadkii 2013, degan 13000 ㎡and ayaa 120 shaqaalaha hadda.
Tan iyo markii ay aasaaska, Focusway xajiya sano horumarka degdeg ah by sano on account of waxa awoodda xirfadeed saarka, habdhaqanka shaqada adag, iyo adeegga macaamiisha lagu qanci karo. Hadda macaamiisha inta badan waxa ay ka yimaadeen Europe iyo America oo ay ku jiraan shirkadaha si fiican u yaqaan. Noocyada kala duwan ee warshadaha ay u adeegto oo ay ku jiraan Farsamada, Auto & Baaskiilka, Laydhka, Electronic, Xarumaha Dadweynaha, iwm Waxaa dhisay sumcad wanaagsan.
Focusway ay higsaneysaa in ay noqon a ganacsiga caalamiga ah ee fasalka-koowaad, macaamiisha soo dhaweyn ka adduunka oo dhan, iyo soo dhaweyn talanti oo kale nagu soo biiraan!